Nivoaka ny lisitr’ireo voafantina amin’ny fetibe literera ao Karaiba andiany taona 2021; betsaka ny mpanoratr’i Trinidad & Tobago voatsonga · Global Voices teny Malagasy
Heverina ho fifaninanana literera malaza indrindra ho an'ny mpanoratra karibeana ny loka OCM/Bocas
Voadika ny 16 Avrily 2021 7:06 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Deutsch, Français, Esperanto , English
Ampahan'ny fonomboky voafantina hifaninana amin'ny loka OCM [One Caribbean Media] Bocas ho an'ny literatiora karaibeana. Sary navelan'ny Bocas LitFest ho ampiasaina.
Miditra amin'ny andiany faha-11 amin'izao fotoana izao ny loka izay heverina ho manandaza indrindra ho an'ny mpanoratra ao Karaiba: ny loka OCM [One Caribbean Media] Bocas 2021 ho an'ny literatiora karibeana. Na dia fizaran-tany dimy aza no mifaninana ao anatin'izany loka izany dia mitazona ny maro an'isa amin'izany kosa ny mpanoratra avy ao Trinidad sy Tobago.
Mitentina $10.000 dolara amerikana ny loka izay manavaka karazam-boky telo—poezia, tantara foronina, ary literera tsy tantara foronina—navoakan'ny mpanoratra Karibeana ny taona mialoha. Amin'ireo sivy voatsonga ho an'ny loka 2021, dimy amin'ireo mpanoratra no Trinbagoniana, ary ny hafa kosa mpanoratra avy ao Dominika, Goyana, Jamaika, ary St. Lucia.
Noho ny valan'aretina COVID-19 moa dia hotontosaina virtoaly fanindroany misesy ny fetibe amin'ny 23–25 avrily. Amin'ity taona ity dia i Vahni Capildeo, nandresy tamin'ny 2016 Forward Prize no ho filohan'ny mpitsara amin'ity loka ity.
Sady ahitana menavazana no ahitana zazavao literera ny mpanoratra voatsonga amin'ny sokajy poezia izay mahasahana lohahevitra isankarazany koa. “Guabancex”, anarana avy amin'ny andriamanibavin'ny rivotra Taíno, no amboara voalohany an'i Celia Sorhaindo, poeta avy any Dominika. Ny bokiny moa dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny fandravaravan'ny rivodoza Maria [mg] ny nosy tamin'ny taona 2017.
Ireo mpitsara sokajy poezia, tarihan'ilay poeta Jamaikana Opal Palmer Adisa, ilay poeta Trinidadiana Danielle Boodoo-Fortuné ary ilay mpanoratra Goyaney-Kanadiana Kaie Kellough, mahatsapa ny bika sy ny fanehoan'ny tononkalon'i Sorhaindo mahajery “ny hadadasika sy ny harefoan'ny fiainana ao amin'ny nosy iray [avy amin'ny] fampahatsiahivana ny ratram-panahy iraisana nihetsika tamin'ny hirifiry sy ny famoizana [mankany amin'ny] manandanja sy azo sainina.”
“The Dyzgraphxst”, tolotra faharoa avy amin'ilay St-Losianina monina any Canada Canisia Lubrin, nofariparitan'ny mpitsara “dia lavitra izay tsy vita rarivato ny lalana, fa mahafapo tokoa”, raha manavatsava fiainana nodiavina nifamezivezena teo amin'ny firenena anankiroa nandritra ny taompolo dimy kosa ny “Country of Warm Snow”—boky fahenina nosoratan'ilay Trinidadiana Mervyn Taylor. Soritsoritan'ny mpitsara ho “boky tsy fahita firy toa mora vakiana mitarika haingana hiampita fotoana sy sisintany nefa mifahatra lalina amin'ny toerana iray.”
Malachi McIntosh tonian-dahatsoratry ny Wasafiri no mitarika ny mpitsara sokajy tantara foronina, izay ahitana ihany koa an'i Roland Gulliver, talen'ny Fetiben'ny Mpanoratra iraisampirenena ao Toronto [Toronto International Festival of Authors], sy ilay mpanoratra Tiphanie Yanique avy amin'ny vondronosy Virijiny Etazonia.
Hita ao amin'ny voatsonga amin'ity sokajy ity ny boky tantara an-tsoratra roa voalohany sy ny boky farany nosoratan'ny efa nahazo loka OCM Bocas taloha. “These Ghosts Are Family,” boky boalohany nosoratan'ilay Jamaikana monina ao Etazonia Maisy Card, mitondra antsika amin'ny fahasarotana mahazo ny taranaka maro mifandimby ao amin'ny fianakaviana iray. Nahavariana ny mpitsara ny boky amin'ny fomba vaovao iresahany ny “tantaran'ny fanandevozana ao Karaiba sy ny ratram-panahy niampitampita hatrany amin'ny taranaka mifandimby.”
Deraina ilay mpanoratra teraka Trinidadiana monina ao Fanjakana Mitambatra Ingrid Persaud tamin'ny “fananganana olona sariaka tokoa” tamin'ny boky tantara an-tsoratra voalohany nosoratany “Love After Love,” raha voafantina tamin'ny boky farany “The Mermaid of Black Conch,”nosoratany ihany koa ny mpiray tanindrazana aminy Monique Roffey, monina ao amin'ny fanjakana mitambatra (UK) ihany koa, boky izay nolazain'ny mpitsikera ho tsara ary vao nahazo ny Costa Book of the Year.
Tsy vahiny amin'ny fahombiazana literera kosa i Roffey izay efa nahazo ny loka OCM Bocas tamin'ny taona 2013 tamin'ny bokiny tantara an-tsoratra “Archipelago.” Tamin'ny boky nosoratany farany indrindra, nilaza ny mpitsara amin'ny “fifehezany ny asa-sorany amin'ny fampiasana ny ‘tamin'izany fotoana izany’ iresahany ny ankehitriny.”
Ny asa-soratra amin'ity sokajy ity, izay mahatafiditra ny andrana, ny tsiaro ary ny tsikera kolontsaina, no mahatonga ny mpitsara— izay tarihan'i Rosamond S. King, ahitana ilay mpanoratra Goyaney-Amerikana Gaiutra Bahadur ary ilay mpanoratra Britanika Blake Morrison—hihevitra fa “eo ampelatanan'ny tena mahay azy ny tsi-tantara foronina Karibeana.”
Ny “tsiaro miloko” an'ilay Trinidadiana monina ao Etazonia Katherine Agyemaa Agard, izay mahay mampiaty amim-pahakingana ny votoaty ara-maso ao anaty fitantarana, dia tondroina ho “efa an'ny za-draharaha,” raha miako ho “feno faharanitan-tsaina mahatalanjona” ireo amboaram-panoratana miresaka zavakanto hatramin'ny politika ao amin'ny “The Undiscovered Country” nosoratan'i Andre Bagoo: “inona ny boky hafa hiresaka ao anaty boky iray ny “street food” trinidadiana, ny poezian'i Thom Gunn [fr], sy an'i Dylan Thomas [fr] miezaka miresaka ny karazan-kira soca [fr]?”
Farany, ny firesahana ny tsiaron'ilay mpampianatra ambony Gordon Rohlehr teraka Goyaney, monina ao Trinidad “Musings, Mazes, Muses, Margins,” izay toy ny fitantaram-piainan'ny mpanoratra amin'ny alalan'ny toetra mifangarika ananan'olona iray sy ny diary-nofy ifangaroan'ny fombafombam-piaingan'ny karnavalin'i Trinidad sy Tobago mialoha ny fiposahan'ny masoandro fantatra amin'ny voambolana hoe J'ouvert, ny “hafanana mampiraikitra” eo amin'ny sehatra lehibe indrindra amin'ny Karnavaly, ary ny halehiben'ny Alarobian-davenona —ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny karemy izay manakatona ny fetibe andalambe fanao isa-taona ao amin'ny firenena.
Navoaka tamin'ny 28 marsa ny lisitr'ireo voafantina famaranana amin'ny loka OCM Bocas, ary amin'ny 24 avrily no hanambaràna ireo nahazo mandritra ny fetibe virtoaly.